Itwetwe kuvalwa isikole e-Harding – Journalismiziko
Home›News›Itwetwe kuvalwa isikole e-Harding
Isikole saseHarding, oGwini oluseningizimu nesifundazwe, iSehole Combined school isivalwe thaqa emumva kokutholakala komunye wothisha oyedwa osetheleleke nge ngegciwane leCorona Virus.
Abazali basale bebambe ongezansi emuva kokuthi abafundi balesi sikole engxenyeni yamabanga aphansi bebuye nezincwadi ezisho ukuthi sekutholakale uthisha osetheleleke ngegciwane leCovid-19.
Ngokwencwadi ekhishwe ilesi sikole esikude buduzane nedolobha lase Harding, okukhombisa ukuthi ikhishwe mhlaka 7 ku-Julayi 2020, iJournalism Iziko eliyibonile ithi, “sazisa abazali ngokutholakala komunye wothisha bethu ngokutheleleka kwakhe ngalesi sifo seCorona Virus.”
Kulencwadi, kuphinde kwagqugquzelwa abazali ukuthi mabagcine izingane zabo emakhaya izinsuku ezintathu kusuka kumhlaka-8 kuya kumhlaka-10 kuJulayi 2020. Ngokwencwadi ithi, “isikole sethu sithinteke kwi- Primary Section kuphela”
“Kumanje sigcwele uvalo amaphaphu aphezulu sisaba ngisho ukuya ezitolo ngoba sinokuthi igcwele iHarding lonke iCorona virus,” kusho uNkk Khosi Dlamini-Sikhosana okungumunye wabazali abathole lezindaba.
“Ngizizwa ngigcwele ukwesaba ngoba lothisha phambi kokuba afike esikoleni uhlangane nenqwaba yothisha abaye kwezinye izikole ezakhele iHarding namaphethelo,” Kusho uDlamini-Sikhosana, echaza ngokukhathazeka mayelana nokubhebhetheka okuthusayo kwaleli gciwane emphakathini. Uqhube wathi izikole zizoba nomthelela omningi ekubhebhethekeni kwalesifo.
“Njengomzali ngibona ukuthi kumele izikole zivalwe ukuze kunqandwe ukubhebhetheka kwalegciwane njengoba umphakathi waseHarding uqale ukuthola imibiko yeCovid-19 ngoba sekuvulwe izikole,” kuphetha uDlamini-Sikhosana
Isikole siphinde sacela abafundi ukuthi babuye babuyele emagumbini okufundela mhlaka 13 ku-Julayi kulonyaka njengoba kukholakala ukuthi isikole sizobe sesisesimeni sokwamukela othisha nabafundi.
South Africa records the highest number of ...
Sad times for creatives as KZN fashion council closes its doors